Miray Aina Madagasikara Nanolotra fanampiana ho an` ny zaza kamboty ao Arivonimamo
Fandaminana tsena any Sambava Leo famindran-toerana lava ireo mpivarotra
Miteraka savorovoro ny famindran-toerana ireo mpivarotra ao amin` ny kaominina ambonivohitra Sambava. Fanintelony izay no namindrana azy ireo.
Omaly alahady dia mbola nanohy ny hetsika ara-tsosialy ny fikambanan` ireo mpanamory « moto » na "Miray Aina Madagasikara".
Nanolotra fanampiana ho an` ny akanin` ny zaza kamboty eo anivon` ny zandarimaria. Maherin` ny 50 ireo mpikambana no nidina tany an-toerana ka nizara paty 1,5 taonina sy 300 baoritra feno savony ho an` ireo tanora miisa 60 ao amin` ilay akany. Marihana zanaka zandary lavo am-perinasa ireo zaza kamboty ireo.